सामसङको नोट २० र नोट २० अल्ट्रा नेपाली बजारमा - Mero Mechinagar
गृह सूचना / प्रविधिसामसङको नोट २० र नोट २० अल्ट्रा नेपाली बजारमा
सामसङको नोट २० र नोट २० अल्ट्रा नेपाली बजारमा
सामसङले हालै आफ्नो फ्ल्यागसिप प्रोडक्टहरु अन्तर्गत, ग्यालेक्सी नोट २० र नोट २० अल्ट्रा स्मार्ट फोनहरु नेपाली बजारमा प्रस्तुत गरेको छ । ग्यालेक्सी नोट २० सिरिजले काम गर्न र गेम खेल्नको लागि थप सहजता प्रदान गर्नेछन् ।
ग्यालेक्सी नोट २० सिरिज मोबाइलहरुले कम्प्युटरको जस्तै कार्य गर्न सक्दछन् र यसमा प्रो–गेमहरु सहजै खेल्न सकिन्छ । ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा र ग्यालेक्सी नोट २०फोन नोट पारखीहरुलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको हो । यसलाई पारखीहरुको पावर एण्ड प्रोडक्टीभिटिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत गरिएको हो । यसमा अझै बढी गेम खेल्न एवं कार्यहरुको सम्पादन गर्न सकिने स्वतन्त्रता प्राप्त हुने कम्पनीको दाबी छ।
‘नेपालमा ग्यालेक्सी नोट २० तथा ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा फोन प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै उत्साहित रहेका छौं । ग्यालेक्सी नोट २० र ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्राले अझै बढी सहजता एवं स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । यसमा निरन्तर काम गर्न र प्ले गर्न सकिन्छ,’ सामसङ मोबाइल नेपालका बिजिनेश हेड, प्रणय रत्न स्थापितले भने ।
सामसङद्वारा प्रिबुक गर्ने ग्राहकहरुलाई ग्यालेक्सी बड प्लस निःशुल्क प्रदान गरिएको थियो । साथै ग्यालेक्सी वाच ३ तथा सामसंग एलईडी टिभी आकर्षक छुट प्रदान गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त प्रि अडर गर्ने ग्राहकरुले विभिन्न क्षेत्रहरुमा आकर्षक छुट तथा उपहार पनि प्राप्त गरेका थिए । प्रि अडर अन्तर्गत खरिद गर्न छुट्नु भएका ग्राहकहरुले पनि हाल पनि थुप्रै उपलब्ध आकर्षक सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीको भनाई छ ।
सामसङको लेटेस्ट नोट सिरिजमा कार्य गर्ने शैली पृथक रहेको छ– यसको एस पेनको सहयोग एवं सामसंग नोट्समा भएका विशेषताहरुले कुनै पनि समयमा जहाँबाट पनि कार्य गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ ।
एडभान्स एस पेनले नियमित नोट प्रयोगकर्ताहरु एवं मल्टिटास्करर्सहरुलाई ग्यालेक्सी नोट २० सिरिजको इन्ह्यान्स्ड एस पेनले अनलिमिटेड राइटिङ्ग अनुभव प्रदान गर्दछ । यसले सही एवं अझै बढी शुद्धता ल्याउन मद्दत गर्दछ । एस पेनमा भएको पाँच नयाँ एनिह्वेयर एक्सनले डिभाइसलाई टचलेस नेभिगेसन–जस्तै होम स्क्रिनमा जान वा स्क्रिनसट लिन झनै सहज बनाउँछ ।
सामसङ नोटका एपहरुको सहज एवं उपयोगी अनुभवः फोटो खिच्न, एडिट गर्न र आफ्ना आइडीयाहरुलाई शेयर गर्न सहयोग गर्दछ, सामसङ नोट एपहरुमा अटो सेभ तथा सिंकिङ्ग क्षमताहरु पनि रहेका छन् । यसमा तपाईंले हातले लेखेको लेखाइलाई आकर्षक अक्षरहरुमा बदल्दछ । साथै पिडिएफमा भएका विषय वस्तुहरुलाई सहजै हाइलाइट गर्न पनि सकिन्छ साथै तपाइँले सामसङ नोट एपमा भएका टेक्स्टहरुलाई एएत्क मा सहजै रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । साथै नोटको रुपमा अडियोलाई राख्न पनि सकिन्छ । यसका सबै विषय वस्तुहरुलाई व्यवस्थित रुपमा फोल्डरहरुमा सुरक्षण गर्न पनि सकिन्छ र सहजै आवश्यकता भएको बेला पाउन सकिन्छ ।
कम्प्युटबाट पनि एक्सेस गर्न सकिनेः माइक्रोसफ्टको योर फोन विन्डोज इन्टिग्रेशनको साथ अव तपाईले आफ्नो फोनलाई विना रुकावट विन्डो १० भएको कम्प्युटरबाट सहजै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ । अझै सहज रुपमा विन्डोज १० युक्त कम्प्युटरबाटै म्यासेज पठाउन, नोटिफिकेशनहरुको म्यानेज गर्न फोटोहरु सिङ्क गर्न र फोन गर्न र आगमन फोनलाई उठाउन सकिन्छ । आफूलाई मन परेको एपलाई कम्प्युटरको टास्कबार वा स्टार्ट मेन्युमा राख्न सकिन्छ, यसले गर्दा तपाइँले आफ्नो फोनमा आफूलाई मन पर्ने सोसियल नेटवर्किङ्ग एप वा ग्यालेरी खोजि राख्नु पर्दैन ।
सामसङ डेक्सको साथ मल्टिटास्किङ्ग सुविधाः सामसङ डेक्सको साथ पहिलो पटक ग्यालेक्सी नोट २० सिरिजका फोनहरुलाई स्मार्ट टिभिमा सहजै कनेक्ट गर्न सकिन्छ । यसरी कनेक्ट गरेर ठूलो स्क्रिनमा आफूलाई मनपरेको विषयवस्तु हेर्न वा खेल्न सकिन्छ । साथै दुईवटा स्क्रिनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरी एकै पटक स्मार्ट टिभिमा भिडियो हेर्न र सँगै साथीलाई म्यासेज पठाउन पनि सकिन्छ ।
आफ्नो मोबाइल फोनलाई अल्टिमेट गेमिङ्ग प्याकेजमा बदल्नुहोस्ः कम्पनीको फ्ल्यागसिप लेभलको प्रोसेसर, गेम बुस्टर तथा १२० हर्जको रेस्पोन्सिभ डिस्प्लेले वास्तवमै गेमिङ्गको मज्जालाई माथिल्लो स्तरसम्म पु¥याउछ ।
एडप्टिभ १२० हर्जको डिस्प्लेः पहिलो पटक नोट सिरिज अन्तर्गत ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा मा स्पष्ट एवं सफा डाइनामिक एमोलेड २एक्स डिस्प्ले तथा एडप्टिभ १२० हर्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ, । यसबाट भिडियो हेर्दा वा गेम खेल्दा स्मूथ अनुभव प्राप्त हुन्छ । यसले स्वतः रुपमा कन्टेन्टहरुलाई एडजस्ट गरी ब्याट्री क्षमतालाई वृद्धि गर्दछ ।
ग्यालेक्सी नोट २० सिरिजमा भएका प्रो ग्रेड टूल्सहरुले अद्वितीय फोटो खिच्न र सिनेम्याटिक स्टाइल भिडियोहरु बनाउन विशेष सहयोग पु¥याउदछन् ।
सिनेम्याटिक–स्टाइलमा फिलिम बनाउनुहोस्ः २१ः९ को रेसियो र २४फ्रेम प्रतिसेकेण्डको रेकडिङ्ग मार्फत ग्यालेक्सी नोट २० सिरिजको एट के क्यामराले उच्चस्तरीय रेजुल्युसनमा भिडियो खिच्न सकिन्छ । यसमा भएको प्रो–भिडियोको साथ सिनेम्याटिक भिडियोको लागि प्रो–ग्रेड फोकस, अडियो, एक्पोजर, जुम स्पीड कन्ट्रोलर, एफएचडीको साथ १२०एफपिएस भिडियो जस्ता मोडहरु उपलब्ध रहेका छन् । यसको साथै प्रयोगकर्ताले अडियो सोर्सलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सक्नुहुन्छ । अनबोर्ड माइक वा एक्टर्नल सोर्स मध्ये कुनै एक छनौट गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा तपाइँलाई सफा साउन्ड प्राप्त हुन्छ ।
दुबै ग्यालेक्सी नोट २० तथा ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा नयाँ आकर्षक रंगमा उपलब्ध रहेका छन्,– सफ्ट नेच्युरल टोन जसले नयाँ ट्रेन्ड, टेक्स्चर हेज इफेक्टलाई कट डाउन गरी फिङ्गरप्रिन्ट छापहरुबाट फोनलाई जोगाउँदछ । ग्यालेक्सी नोट २० फोन मिस्टिक ब्रोन्ज, मिस्टिक ग्रे, मिस्टिक ग्रीन रंगमा उपलब्ध छ भने ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा फोन मिस्टिक ब्रोन्ज तथा मिस्टिक ब्ल्याक रंगहरुमा उपलब्ध रहेको छ।
यसमा भएको दिनभर टिकाउ हुने ब्याट्री, सुपर फास्ट चार्जिङ्ग सुविधा विद्यमान रहेका छन् । यसमा ५० प्रतिशत व्याट्री चार्ज केवल ३० मिनेटमा गर्न सकिन्छ।
मूल्य एवं उपलब्धता
ग्यालेक्सी नोट २० को नेपाली बजारमा रु. १०९,९९९ रहेको छ भने ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा को बजार मूल्य रु. १३९,९९९ तोकिएको छ । यी दुबै फोन यही भाद्र २२ गते देखि नेपाल अधिराज्यभरका सम्पूर्ण सामसङ ब्राण्ड स्टोर तथा रिटेल स्टोरहरुबाट खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्यालेक्सी नोट २० तथा ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्राको खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई एकपटकको टुटफुटमा एनएलजि इस्युरेन्सबाट १ वर्षको बीमा तथा विभिन्न बैंकबाट मासिक किस्तामा (इएमआई) खरिद गर्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ । साथै अर्को स्टोर तथा आइएमएस स्मार्टमार्फत सामसङ स्मार्टफोनका ग्राहकहरुले एक्स्चेन्ज गर्ने सकिने सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
अघिल्लो लेखमाकोरोना भाइरसविरुद्धको रुसी खोप भारतसहितका केही देशहरुमा पनि परीक्षण गरिने
अर्को लेखमाअब फेसबुकमै इन्स्टाग्राम स्टोरिज हेर्न सकिने
मोबाइल मनी सेवाको लागी टेलिकमले पायो अनुमति, एक महिना भित्र सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी